Wararka Maanta: Isniin, July 1 , 2013-Munaasabad lagu Mamuusayay Maalinta Xorriyadda ee 1-da Luuliyo oo lagu qabtay Magaalada Baladweyne (SAWIRRO)
Isniin, July 01, 2013 (HOL) — Munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay
islamarkaana lagu mamuusayay 53 sano guuradii ka soo wareegatay waqtigii ay ka xorroobeen gobollada Koonfureed ee Soomaaliya gumeystihii Talyaaniga iyo Is raaciin labada gobol W/qooyi iyo Koonfur ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabada oo bilaabatay xalay ayaa ilaa xiliyadii hore ee maanta ka soctay magaalada Baladweyne, iyadoo ay ka qeyb-galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka, saraakiisha ciidamada dowaladda iyo kuwa Jabuuti,fanaaniin, dhalinta bar-baarta gaashaaman iyo dad-weyne isaga kala yimid xaafaddaha magaalada.
Munaasabada oo aheyd mid siweyn uga duwan marka la eego sida loo soo qaban-qaabiyay kuwii ka horeeyay, ayeey sidoo kale ciidamada maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa Jabuuti waxaa ay gaado ka cayaar ku soo bandhigeen xerrada Lama-galaay ee magaalada Baladweyne, iyadoo ay goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha gobolka Cabdi Faarax Lanaqyo, taliyaha ciidamada Jabuuti Col Cismaan Dubad, saraakiisha ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee xubnaha maamulka.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo hadlay ayaa siweyn ugu dheeraaday qiimaha maanta oo kale 01-da Luulyo uga fadhiso shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isaga oo sheegay in calanka buluga ah uusan aheyn mid sahal lagu hantay ama ku yimid, laakiin ay jiraan geeyaal badan oo dhiigooda u huray una dhintay sidii loo gaari lahaa xorriyada aynu maanta heysano.
Waxaa uu hanbalyo iyo bogaadin u dirray shacabka guud ahaan ku dhaqan gobolka qeybihii kala duwan, isaga oo ugu hanbalyeeyay xuska munaasabada 01-da Luulyo.
Cabdi Faarax Laqanyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed u dirray dhalinyarrada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Hiiraan madaama ayuu yiri dhalinyarradu xoog aan la dhayalsan karin oo ka tirsan bulshada.
“Waa wax lagu farxo in dhalinyarro Soomaaliyeed waqti danbe u soo jeedaan sidii ay u xasuusan lahaayeen maalinta xorriyada, iyadoo laga yaabo intooda badan in ay ku garaadsadeen ama ku koreen waqtigii colaada, waxaa u soo jeedinayaa dhalinyarrada in ay ka qeyb-qaataan nabada iyo dib u dhiska dalka,'' ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Cabdi Faarax Laqanyo.
Taliyaha ciidamada Jabuuti Col. Cismaan Dubad oo hadllay ayaa sheegay in dhinacooda ay siweyn ugu faraxsan yihiin ka qeyb-galka xuska 01-da Luulyo, maadaama ayuu yiri labada shacab ee Jabuuti iyo Soomaaliya yihiin kuwo walaalo ah oo dhinac kasta ka mideysan.
Col. Cismaan Dubad oo siweyn ugu dheeraaday ka hadalka deegaannada wali gacanta ugu jira Al-shabaab ayaa sheegay in uu soo dhamaaday qorhihii lagu gaarsiin lahaa maamulka guud ahaan qeybaha uu gobolka ka kooban yahay dhawaanna ciidamada bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah Al-shabaab.
“Waxaan rabaa in aan fariin u dirro dhalinyarrada yar yar ee Soomaaliyeed ee wali ku dhagan afkaarta kooxda Al-shabaab, waxaan ugu baaqayaa in ay isaga oo baxaan, waayo hadda waaba ay u dhamaatay oo waa kuwaa is ugaarsanaya, marka waxaan leeyahay dhalinyarrada isaga soo taga kooxdaas aad ka tirsan tihiin kuna soo biira hanaanka nabada si aad mustaqbalkiina u dhisataan,'' ayuu yiri taliyaha ciidamada Jabuuti Col Cismaan Dubad.
Munasabadda waxaa intii ay soctay ku soo bandhigay cayaaro hido iyo dhaqan ah bar-baarta gaashaaman oo siweyn ugu soo labistay dharka hidaha iyo dhaqanka oo siweyn u soo jiitay ka qeyb-galayaashii munaasabada.
Qaybta hore ee munaasabada waxaa xalay lagu qabtay xarunta maamulka gobolka halkaa saakay waabarigii hore sidoo kale munasabad balaaran lagu qabtay xerrada Lama-galaay ee magaalada Baladweyne.